Iindaba -Ujonga njani ukubonakala kweebheringi ezingaqhelekanga
Zonke iintlobo zamanxeba oomatshini, njengokukrala, imikrwelo, ukonzakala koxinzelelo, ukugruzuka, njl., Kuya kubangela ukufakelwa kokuthwala okungalunganga, kubangele imithwalo ye-eccentric kunye noxinzelelo loxinzelelo, kwaye kubangele ukwehla kokujikeleza ngokuchanekileyo kunye nobomi benkonzo.
Umhlwa, ulusu olumnyama, kunye nokungena, ezi zimbini zokugqibela ziziphene ekulula ukugcina ukufuma kunye nokungcola, kwaye kunokwenzeka ukuba zikhule zibe ngumhlwa. Umhlwa ngumthombo wongcoliseko olukhokelela kufakelo olubi, ukunxiba kwangoko nokudinwa. Umhlwa omkhulu uya kwenza iibheringi zingasebenzi.
Iintanda ezahlukeneyo, ezinjengeentanda zempahla eluhlaza, ukuqhekeka kwemingxunya, ukunyanga ubushushu kunye nokugaya iintanda, njl., Ezi ndawo ziya kuba ngumthombo woxinzelelo loxinzelelo kwaye zande ngokukhawuleza ngexesha lokusebenza kwebheringi kwixesha elizayo, zibangele ukugqabhuka, ichaphazela ubomi bokuthwala kunye nokusebenza kokhuseleko olukhulu. Njengokuba kunjalo, iibheringi ezibalulekileyo, i-fektri ethweleyo yenze uhlolo lwe-100% yamagnetic okanye ye-radiographic kumacandelo ayo.
Ukuxobuka kunye nokusonga, iziphene zalapha kwezi ziphene zimbini azibophelelwanga kwisinyithi esisisiseko, kwaye zihlala zikhona decarburization okanye ukupheliswa kwekhabhoni okubangqongileyo. Imathiriyeli kulula ukuwa, ukubola, okanye ukunxiba, okuyingozi ekuthwaleni ubomi kunye nokuchaneka.
Umgangatho we-riveting okanye i-welding ye-cage, ikakhulu ukujonga ukuba ngaba intloko ye-rivet ayichanekanga, i-skewed, i-slack, ukungabikho kwenyama okanye "i-eyelid ephindwe kabini", nokuba indawo yokufaka i-welding ichanekile, ingaba iphuzu le-welding likhulu kakhulu okanye encinci, nokuba ayi-welding kakuhle okanye ngaphezulu kwe-welding Ibangela ukwenzeka kwezinto ezixineneyo zokuqengqeleka.